Cilmi-Baadhis : Cadaysay in adeegsiga xad-dhaafka ah ee moobilada loo yaqaano “Smart Phones ay dhalan-dooriso qaybo ka mid ah maskaxda.
Cilmi-Baadhis cusub oo lagu sameeyey dalka Switzerland ayaa cadaysay in adeegsiga xad-dhaafka ah ee moobilada loo yaqaano “Smart Phones” gaar ahaan kuwa farta lagu maamulo ee “Screen Touch” ay dhalan-dooriso qaybo ka mid ah maskaxda.
Culimada cilmi-baadhistan sameeyey ayaa ogaaday in moobiladan oo aad loo adeegsadaa ay si xun u saamayso qaybaha maskaxda u qaabilsan maamulida Saddexda farood ee kala ah; Suulka, Far-dhexada iyo Murdisada.
Xasaasiyadda ay goobahani u leeyihiin in ay la jaan qaadaan moobillada ayaa ka duwan dhammaan qaybaha kale ee jidhka.
Culimadan ayaa uga dan lahaa cilmi-baadhistan in ay ogaadaan heerka ay isugu saamoobaan taabasha muraayada moobiladan iyo qaybaha maskaxda u qaabilsan maamulida Saddexdan farood.
Hadaba Cilmi-baadhistan oo ka dhacday Jaamacadda Zurich, ayaa tijaabo lagu sameeyey 37 qof oo ah dadka gacanta Midig u adeegsada Isticmaalka moobilada “Smart Phones” iyo 26 ruux oo ah dadka gacanta Bidix u isticmaala moobiladdan, iyo weliba 11 ruux oo ah dadka adeegsada moobilada qadiimiga ah ee leh lambarada la garaaco (mobilada aan ahayn Smart phones
Kooxda tijaabadan samaysay ayaa adeegsatay qalab loogu talo galay inuu qiyaaso dhaqdhaqaaqa xuubka maskaxda marka la taabto Saddexdii farood ee aynu soo sheegnay.
Haddaba Fal-calinta xuubka maskaxda ee dadka adeegsada moobillada “Smart phones” ayaa si waadax ah uga badnayd dadka kale ee aan adeegsan Smart Phones.
Waxa layaab noqotay in fal-celinta xuubka maskaxdu ay aad ugu badnayd dadkii isticmaalay Smart Phone 10-kii cisho ee tijaabada ka horeeyey.
eng Mahbub Hussein Ismail